फेसबुकले दिलायो फूलकुमारीलाई नयाँ जीवन • Nepal's No. 1 Digital News Paper .
(सुरेन्द्र भण्डारी) सुरुङ्गा (झापा), २८ भदौ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको दुरुपयोग भइरहेका बेला केहीले भने यसलाई समाज सेवाको माध्यम बनाएका छन् । बाह्रदशी गाउँपालिका–७ निवासी आर्थिकरुपले अति विपन्न एक क्यान्सर पीडित युवतीलाई उपचारका लागि खर्च जुटाएर रोग मुक्त गराउने सोही ठाउँका टोम राजवंशीसहित तुलसीप्रसाद राजवंशी, गोपालचन्द्र राजवंशी, कुवित राजवंशी र श्याम राजवंशी समाजका उदाहरणीय पात्र बन्नुभएको छ ।
सो अभियानबाट जुटेको रकमबाट उपचार गराइएपछि उनले नयाँ जीवन पाएकी हुन् । उनको उपचारका लागि नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीले नबिल बंैकको २११००१७५०३६४० नम्बरको खाता रकम उपलब्ध गराएका थिए । सहयोग पाएपछि क्यान्सरको शल्यक्रिया गरेर सञ्चो भएपछि अहिले उनलाई घरमा ल्याइएको छ । सबैको सहयोगमा नयाँ जीवन पाएपछि फूलकुमारीका वुबा–आमा मात्र होइन अहिले डाँगीबारीवासी हर्षित छन् । सबैको स–सानो सहयोगले पनि क्यान्सरजस्तो रोग निको भएर र छोरीले नयाँ जीवन पाएको भन्दै उनका बुबा शेषलालले सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ ।
सबैको सहयोगमा छोरी फूलकुमारीले नयाँ जीवन पाएकामा शेषलाल अति खुशी भए पनि उहाँमा उत्तिकै पीडा पनि थपिएको छ । विसं २०६६ मा विरिङ खोलामा आएको बाढीले उहाँको परिवारलाई विस्थापित बनाएको थियो । भएको जग्गा जमिन नदीले कटान गरेर बगरमा परिणत गरिदिएपछि उहाँ अर्कैको जग्गामा आश्रय लिई फुसको छाप्रो हालेर बस्नुभएको थियो । आश्रय लिइएको ठाउँमा पनि साउनको अन्तिम साता आएको बाढीले क्षति पु¥यायो । त्यसबेला उहाँ छोरीको उपचारका लागि भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो ।
बाढीले क्षति पु¥याएपछि उहाँ अहिले छिमेकीको शरणमा हुनुहुन्छ । भएको छाप्रो पनि बस्न नमिल्ने भएको छ । न उहाँको घरमा ओढ्ने छ, न त ओछ्यान नै । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको राजवंशी परिवारको अहिले न खाने अन्न छ न त बस्ने बास नै । “मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै थिएँ, छोरी बिरामी भएपछि उनको उपचारका लागि अस्पताल बस्दा अहिले गर्जो टार्ने उपाय नै रहेन”, शेषलालले भन्नुभयो । छोरीको सफल उपचारपछि घर फर्कनुभएका उहाँ छोरीले पाएको नयाँ जीवनप्रति खुशी भए पनि बस्ने घर नै नभएपछि उत्तिकै चिन्तित बन्नुभएको छ । रासस